Fandalorana - Henan Arintany Research Keming Mechanical Co., Ltd.
KPZ Electric maotera shotcrete milina
KPZ-A Air maotera shotcrete milina
KPZ-D Diesel maotera shotcrete milina
mando Shotcrete Machine
JPS6IH Arintany Mine Shotcrete Machine
orinasa Hose Pump
Sombin-javatra Concrete Pump
Rihitra simenitra Mixer
Plasterer ny asa
Raha ny mahazatra dia ny mpiantoka dia efa nanome ny harona ny Gypsum sokay izay ho ilaina, ary koa famatsiana ivelany misy ny rano raha toa ny trano tsy mbola mifandray. Ny tantsambo ny fandalorana mila hitondra ny fitaovana sy ny fitaovana ary indraindray manome ny Bead.
Ny asa izay matetika ny plasterer antenaina mba hanatanterahana.
Ny plasterer matetika tsy maintsy aloha, isaky Cornerbead foto na teo protruding rehetra (ivelany) zorony ny ao anatiny ao an-trano. Care no naka izany mba hahazoana antoka mahatonga ny rindrina fijery mahitsy sy kokoa ny fahaizana ny maso noho ny zavatra hafa.
"Bead" tonga amin'ny fomba maro; Miainga amin'ny tariby harato miraikitra amin'ny foto-tsakafo ho vy mavesatra naoty izay mila tacked eo amin'ny fantsika. Misy ihany koa ny karazana plastika.
Ny Bead Tsy maintsy norefesiny ireo sady nitetika ny habeny; fikarakarana dia alaina tsy ho manenjana na mandiso azy. Ao amin'ny toerana izay mihoatra ny iray mifanena zorony; ny Bead dia tapaka ny faran'ny Amin'ny fiolahana sy ny 2 na mihoatra toro-hevitra no apetraka ho akaiky ho toy allowable; mampihetsi-po fa tsy nifandimby. Ny Bead dia tanteraka rakotra sokay ary koa ny sisa amin'ny rindrina sy ny lalotra ihany koa ny manampy ny hihazona izany mafy. Ny vokatra vita ravina ihany kely hita metaly esory amin'ny protrusion an-jorony izay nanarona vokany raha ny manda indray no hita. Izany mamela madio, mahitsy Mitady zorony.
Ny fomba hafa hita ao amin'ny trano be taona ny namorona ny boribory na bullnosed zorony mampiasa ny hazo quirked Bead mpiasa. Ny mpiasa Bead, ny 1 santimetatra eo ho eo 1/3 dowel amin'ny noharatany ny indray, efa mipetraka eo amin'ny zorony ivelany ny joiner an-toerana, hazo plugs nafatony teo ho eo an-biriky / andian-tsoratra seams, na any amin'ny ala filanjana. Sokay dia nihazakazaka ho amin'ny mpiasa Bead ary avy eo nanapaka an-toerana indray ny Bead na "quirked" mba hisorohana ny malemy volom-borona lelan ny lalotra izay mahafeno ny Bead.
Ao amin'ny trano nizotra tsara dia kely 'V' miendrika fantsona nampiasaina mba mifindra sy hanome fanampiana ny koronosy boribory convex. Mba hamorona ny voalalotra zorony, manampy akanjo (Browning) dia voalalotra ho amin'ny mpiasa Bead, dia nizotra tsara dia tapaka tao an-manohana akanjo kely vita lehibe kokoa noho ny habeny. Rehefa skimming akanjo ambony no ampiharina, indray ny Bead tanteraka skimmed tany, ary avy eo, mampiasa mahitsy sisiny, ny nizotra tsara dia indray lotika ny vita ny ambany, matetika amin'ny iray tokotokony 45 diplaoma zoro any an-Bead. Dia hanafina ny nizotra tsara ny aoriana hirika kely izay endrika eo ny tehina Bead sy ny sokay.
Ny plasterer mila hameno ny 5-gallon siny partway amin'ny rano. Avy siny io dia mihantona ny trowel na trowels sy ny toerana ao anatiny fitaovana isan-karazany.
Raha ny mahazatra dia ny plasterer manana trowel iray noho ny "fametrahan-" (ny dingan'ny nametraka fotaka ny mandan'i).
Ny sasany dia be taona trowel foana izay manana mendrika manenjana ao (akondro curve) mba ho ampiasaina amin'ny zava-kendren'ny "texturing"; raha niantso ny homeowner. A laika-on trowel mazàna ho fisaka loatra noho izany, ary ny banga nateraky ny rano dia afaka mifikitra izany ho any amin'ny manda, nanery azy hamiravira azy eny ary dia toy izany no tsy maintsy rework ny faritra.
Farany, olona iray dia afaka manana marika trowel vaovao "Tsy mbola torotoro-in" izay hataony ampiasaina amin'ny "mitoto vary"; izany dia rehefa ny lalotra dia efa mafy fo, ary izy smoothing avy mikitoatoana rehetra na kely mameno Na izany na tsy miara-manatsoboka (saka miatrika) mba hahatonga ny rindrina fijery toy ny ravin-malamalama fanamiana sokay fotsy.
Plasterers ankamaroan'ny manana ny tian'ny noho ny haben'ny ny trowel ampiasainy. trowels entiny ny mpitondra, ny sasany ho lehibe toy ny 20 santimetatra ny lavany, fa ny fenitra toa ho 16 "× 5". Avy ny zavatra niainako ny tiany marika dia Marshalltown Stainless vy. Manana brassy famirapiratany ho azy ireo, ny fingotra tsy mitana sy lavaka na harafesina, raha tsy nahy sisa amin'ny rano nandritra ny alina ny sasany kosa misafidy mangalatra tsy tapaka trowel izay mitaky fikarakarana bebe kokoa, fa maharitra ela be, ary ny hampiady afaka manome azy " manaikitra "izay manampy, rehefa" vita "(ny farany rehefa ny lalotra dia mametraka).
Ho eo an-siny lehibe ihany koa ny mandeha borosy ampiasaina mba hanosotra rano ny mandan'i sy manadio ny fitaovana, ny loko ho an'ny smoothing zorony borosy, ary ny vorona jorony ho an'ny famoronana zorony (na dia maro aza anjara iray vorona tsara mba hitandrina ny efitrano mirindra tsara).
Ireo fitaovana ireo siny foana aloha akaikin'ny Mix latabatra ary avy eo toy ny lalotra manomboka dia nifindra teo akaiky kokoa ny rindrina izay efa niasa tao. Time lasa antony lehibe eto toy ny indray mandeha ny lalotra manomboka hanamafy (Set) dia hanao izany somary haingana sy ny plasterer manana sisiny kely ny fahadisoana mba hahazo ny rindrina malama.
Tao ny mampifangaro ny plasterer matetika latabatra mametraka ny "hitsikitsika" dia ho toy izany mora raisina rehefa mila haka sy hitandrina vovoka eny izany. Izay mety ho potipoti-javatra ao amin'ny lalotra mety ho lasa lehibe nuisance.
Sokay tampon na ny ambany?
Plasterers dia matetika mizara ny efitrano, (indrindra fa ny lehibe na manda avo-ceilinged) ho ambony sy ambany. Ny olona miasa eo an-tampony dia hanao avy amin'ny valin-drihana ny sisin'ny ny momba ny kibony haavon'ny ary miasa avy eny ambony entana feno ronono ho an'ny 8-tongotra (2,4 m) valin-drihana, na ny asa misy tongony eny nandritra ny 12-tongotra-efi-trano ambony. Fa katedraly tafo na manda avo dia avo, no nanangana staging ary ny anankiray manao topside, ny hafa bebe kokoa eto ambany.
Manadio teo anatrehany izy ireo hamita ny asa
ankapobeny atao amin'ny mpiasa. Tsy misy sokay globs tavela teo amin'ny gorodona, rindrina na ny zorony Bead sisiny. (Ho mampiseho ny raha voaloko sy hanelingelina Flooring ary horantsanantsika). Esory na Kendreo niisa ny fako.
rehetra efi-trano sy ny rindrina no nandinika ny famoretana sy ny dents na scratches izay mety ho nahatonga avy amin'ny olon-kafa ho any an-rindrina bumping. Nandinika ihany koa izy ireo mba hahazoana antoka tsy mikitoatoana sisa teo amin'ny rindrina avy amin'ny sokay ny famafazana na ny rano. Efitra rehetra dia amin'ny teny anglisy mba hahazoana antoka sokay dia nandondòna rehetra avy tao an-baovao toy izany koa ny elektrisianina dia afaka mametraka ny faladiany, ary mba hahazoana antoka tsy misy fitaovana sisa aoriana. Izany mandao ny rindrina vonona ho ny mpanao hoso-doko sy ny finishers ho avy ka hanao ny raharaham-barotra.
Interior ny fandalorana teknika
ny tompon'ilay an-trano sy ny mpampiasa ny plasterer dia matetika no hanapa-kevitra mialoha izay fomba dia ho ampiasaina ao an-trano. Rindrina matetika dia malefaka ary indraindray tafo. Matetika nanana trano dia misafidy ny hanana ireo tafo mampiasa "mihasimba" teknika tahaka ny mora kokoa, haingana kokoa, ary dia toy izany no mora kokoa noho ny malamalama valin-drihana.
Ny plasterer nalaina teknika mifototra amin'ny vidin-javatra mba ho ampiasaina sy ny birao tongotsika nanarona ny mpiantoka na ny homeowner alohan'ny manomboka ny asa. Ny birao tongotra dia azo avy amin'ny hangers na vinavinaina-doha subcontractor amin'ny alalan'ny manisa ny wallboards izay avy amin'ny orinasa fari-8 'ny 12' ela. Avy eo izy dia manampy amin'ny fandaniana fanampiny ho an'ny Cathedral soffits sy ny tafo.
Valin-drihana faharoa na voalohany
ankapobeny, raha ny valin-drihana dia ho malama efa natao voalohany, teo anoloan'ny manda. Raha tokony textured, efa natao araka ny rindrina.
Ny antony fa izany no fa foana rehefa misy valin-drihana no ho niasa tamin'ny lalotra ho lavo sy hanosotra teo amin'ny rindrina. Na izany aza dia mihasimba Mix tsy mila Voalaminay avy rehefa manomboka ny hametraka:
Izao no ho retardant toy ny hoe "Cream ny tartar" na siramamy azo ampiasaina mba ho maro ny toe-javatra ny fotoana, ary mora ary norakofako intsony ny rindrina.
ary satria ny fotoana dia tsy toy ny nisakana ny toe-javatra eo amin'ny tafo textured Mix lehibe, na back-to-miverina miharoharo azo atao sy ny valindrihana nanarona tamin'izany andro izany.
antony iray hafa dia ny vorona dia matetika mihazakazaka eny an-tampon'ny zorony rehefa avy manao ny malamalama valin-drihana, dia mora kokoa ny hanana izany tsisin'ny amin'ny alalan'ny fanaovana ny rindrina farany. Ary ny valin-drihana textured tsy dia mila birded, ihany dia mitambatra ao amin'ny tena lena loko borosy. Amin'ity tranga ity ny manda natao voalohany sy amin'ny zorony niforona ny vorona.
Ny zavatra voalohany ny plasterer mitady hanao dia hankany rehetra ny harato-seams mipetaka amin'ny rindrina izy no efa akaiky handrakotra; tamin'ny fomba tena manify swatch. Ny wallboard Misarika ny hamandoana esory amin'ity tany ity ka rehefa mandeha ny plasterer eo amboniny indray, rehefa manao ny sisa amin'ny manda dia tsy hamela ny indented seam izay mila reworking bebe kokoa.
Avy eo izy dia mameno ao amin'ny faritra akaikin'ny valin-drihana ka tsy voatery manainga ho tonga izany mandritra ny sisa amin'ny manda; Ary teny an-jorony sy ny vorona. Izany Mamonjy fotoana tena ilaina tahaka ity dingana ity dia hazakazaka fanehoan-kevitra manohitra ny simika.
Avy amin'ny Mix latabatra ny plasterer Mandavaka ny sasany "fotaka" tao amin'ny foibe ny hitsikitsika ny trowel. Mitandrina tsara ny hitsikitsika ny eny-tànany sy ny trowel ao amin'ny Kilonga avy eo ny plasterer Mandavaka ny bulging horonan-taratasy ny sokay teo ny trowel. izany maka kely ny fanao ho tompony, indrindra fa amin'ny soupy miharoharo.
Ary mihazona ny trowel mitovy amin'ny rindrina sy amin'ny zoro kely ny hato-dia miezaka ny mitovy ny hakodian'ny olona ny lalotra sokay teo amin'ny rindrina. Amin'ny fomba toy izany koa ny squeegee. Manomboka izy momba ny santimetatra ambonin'ny tany ka manao ny lalana miakatra ny ho any amin'ny valin-drihana. Care dia naka ho fanamiana araka izay azo atao araka ny manampy ao amin'ny dingana 'ny fahavitany.
arakaraka ny faritra ny fotoana ny lalotra. indray mandeha ny hamandoana ny lalotra manomboka ho voasariky ny birao mandalo faharoa no natao. izany no antsoina hoe mandondòna izy. dia be toy ny fampiharana loko amin'ny hato-roller amin'ny asa sy ny tanjona. nampalama misy tsipika ary fenoy Na izany na tsy lehibe voids izay hanao asa fanampiny indray mandeha ny lalotra manomboka tena teo. Tena kely ny tsindry ampiharina sy ny trowel dia somary fisaka foana manoloana ny manda.
Indraindray ny accelerant hanampy ho fifangaroan mba hanafaingana ny fotoana andrasana avy amin'ny dingana ho voalohany, rehefa mampifangaro ny lalotra manomboka hametraka. Izany no tokony atao amin'ny andro mangatsiaka, rehefa mametraka ny tara na ny kely mba hampihenana ny asa miandry.
Raha vao ny lalotra eo amin'ny rindrina, ary nanomboka teo (izany mety ho tapa-kevitra ny latabatra izay mametraka aloha), ny plasterer gingerly mamafy ny rano tao amin'ny manda; izany dia manampy ny fihinanam-bilona ny toerana, ary mba hamoronana ny taratasy kely. Avy eo izy dia mampiasa ny trowel ary matetika ny wetted nahatsapa borosy natao tao mifanohitra tanana, ary kely mikasika ny manda mialoha ny trowel hiasa izany taratasy kely miakatra amin'izay kely banga (fantatra amin'ny hoe "catfaces") ao amin'ny lalotra ary koa mitovy tantana ny gony nandry-on ka flatten misy rivotra ka manjary miboiboika izay niforona nandritra ny fametrahana.
Ity no fotoana iray tena lehibe satria raha mahazo ny manda mafy loatra dia saika tsy ho vita ny mameno Na izany na tsy ho toy ny taratasy kely banga intsony teo amin'ny rindrina ary fa tsy maina fotsiny ka ho lavo hiala. Izany dia mitarika ho amin'ny filàna ny ilay antsoina hoe "-mitoto vary" tahaka ny tsy maintsy hankany an-dafin'ny mafy manda indray, ary indray miezaka mitovy tantana ny mafy fo rindrina sy izay lehibe catfaces dia tsy maintsy ho feno ao amin'ny contour putty, mpiara iombonana, na reworked ny mampifangaro in vaovao, akanjo manify.
Ny rindrina vita dia hijery malamalama sy mitovy ny fisaka ary malama ny kasihina. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia ho fotsy chalky ary afaka avy eo ho voaloko eo.
avy ny fotoana ny harona dia dumped any an-barika ho any, rehefa tanteraka ny manda teo dia antsoina hoe Mix. Samihafa ny teknika ampiasaina, ary na accelerant na retardant dia nanampy, fifangaroan matetika maharitra adiny roa.
Ny fotoana farany no tarihan'i indrindra raha toa ka malama, na raha ny Mix mametraka haingana kokoa noho mialoha. Raha mitranga izany dia hoy ny Mix efa "nibetroka" ary ara-dalàna noho ny fampiasana vokatra antitra na ny isan-karazany ny toetr'andro (hamandoana na mafana ny andro dia afaka hahatonga sokay izay hafahako haingana). Raha ny mahazatra dia afa-tsy telo na efatra miharoharo dia atao amin'ny andro toy ny fandalorana no tena mandreraka fa tsy toy ny voajanahary mahomby eo ambanin'ny jiro ao an-bolana tamin'ny maizina ny andro tany am-boalohany.
ny fandalorana no fanaony isan manodidina, fa tsy manam-paharoa ny olana mety hitranga amin'ny vanim-potoana ny vanim-potoana. Amin'ny fahavaratra, ny hafanana mitady hahatonga ny lalotra izay hafahako haingana kokoa. Ny sokay azy manokana ihany koa ny miteraka hafanana sy ny trano dia mety ho lasa tena hellish. Matetika ny lalotra tantsambo dia hiezaka mba tonga tao an-trano tsara alohan'ny mangiran-dratsy.
Amin'ny ririnina, fohy andro mahatonga ny filàna ny solon-jiro. Amin'ny lafiny sasany jiro ireo afaka manao na dia ny rindrina smoothest mitovy ho etỳ ambonin'ny ny volana. Iray hafa olana eo amin'ny ririnina dia mila mampiasa propane fiaramanidina heaters (izay tsy hampietreny ny lalotra mavo, fa aza raha tsy izany dia manimba azy), fa tsy hoe mba hitandrina ny plasterers mafana fa koa hisorohana ny rano tao amin'ny mifangaro amin'ny hatsiaka sy niteraka ranomandry kristaly alohan'ny lalotra dia manana fotoana izay hafahako. Koa raha ny rano dia tsy tsara Hose notrohinao mbamin'ny faikany talohan'ny nandaozany dia mety mandry ny alina, ary ho tanteraka intsony maraina.
Texturing dia matetika natokana ho an'ny efi-tranonareo, tafo sy rindrina garazy. [Ambadika ilaina]
Matetika ny mpandraharaha no nanampy retarding ny Mix. izany no tokony Cream ny Tartar (na "Dope" ao amin'ny plasterer ny teny teknika) sy ny fikarakarana tsy maintsy ho entina miaraka amin'ny vola nanampy. Be loatra sy ny tsy mety teo Mix mihitsy. Na izany aza ny vola ampiasaina matetika tombanana; be ny fomba iray manampy ny tsipika ny sira amin'ny fomba fahandro. ianao hametraka kely scoop ny retarder, miankina amin'ny haben'ny ny Mix. Retardant dia nanampy mba miharoharo lehibe kokoa azo atao, satria ny mihasimba teknika dia tsy mitaky ny olona mba hiandry mandra-manomboka mba harosony eny anoloan'ny miasa izany.
Ny laika-on dingana dia mitovy tahaka ny mandrobo fa efa nanampy tamin'ny akanjo matevina. Raha vao ny akanjo mitovy ny eo ny plasterer avy eo miverina sy vorona ny zorony. Mitoetra niala an-jorony izy avy eo mahazo ny trowel amin'ny akondro tsara curve teo aminy sy manomboka mihazakazaka izany eny ankoatry ny manda amin'ny isa valo na Ess lamina, ka azo antoka ny hiampita faritra rehetra, fara fahakeliny, indray mandeha. Hoy izy nanampy kely fanampiny sokay ny trowel raha ilaina. Ny vokatra ankapobeny dia sosona ny loko-tahaka swaths ny rehetra amin'ny valin-drihana na ny rindrina. Afaka mandeha fotsiny avy eo lasa ary aoka izany teo amin'ny fikarakarana tsy nalaina na koa miala globs sy mba hahazoana antoka ny zorony mijery malefaka sy Linear.
Raha misy manda dia ny ho malefaka sy ny valin-drihana textured, matetika ny manda natao voalohany, vao ny valin-drihana aorian'ny rindrina efa nametraka. Raha tokony rebirding ny valin-drihana (izay mety ho natao rehefa ny manda teo amboniny), madio trowel no natao tamin'ny rindrina sy ny zorony dia nihazakazaka teny an-valin-drihana mba "handrasa azy", ary manadio ny rindrina miaraka amin'izay koa. Io andalana io dia Voalaminay amin'ny paintbrush hanao ny tetezamita miray volo.
ny sponjy (ara-teknika antsoina hoe float), dia manana endrika boribory sy marokoroko ambonin'ny. izany dia ferana amin'ny manohana amin'ny afovoany handhold ary mitovitovy habe amin'ny fitsipika trowel. Sponjy dia Variant mihasimba ary nampiasa teknika ara-dalàna eo amin'ny tafo ary indraindray ao amin'ny efi-tranonareo. Matetika rehefa mampiasa ny sponjy; fasika dia nanampy ny Mix sy ny teknika atao hoe fasika-sponjy.
Care tokony ho raisina tsy mijanona mivantana eo ambanin'ny trowel rehefa manao izany tahaka ny tena, tena mahafinaritra, ary mampidi-doza mba hahazo vary ny fasika amin'ny masonao; izay mainka ny fahasorenana avy amin'ny sokay ihany koa. Io dia afaka mora foana miaraka rangotra, ratra kely ny maso.
Maro no-on sy Mix dia mitovy toy ny amin'ny texturing tsy tapaka. na izany aza rehefa misy akanjo fanamiana sady mandimandina apetraka eo amin'ny valin-drihana sy ny sisiny dia tapaka ao; mahitsizoro manokana sponjy amin'ny tahony dia mihazakazaka manerana ny valin-drihana ao nifandimby sy boribory pahazarana. Sendra manao izany fahaizana enti-mampianatra sy mampihatra ny manao tsara.
Ny fijery ankapobeny dia fishscale karazana endriky ny valin-drihana, rindrina efi-tranonao, sns Na dia retarder no matetika ampiasaina; fikarakarana tsy maintsy noraisina mba hanadio ny sponjy tsara rehefa vita toy ny misy sokay izay manamafy ao dia ho vita ny hanesorana.
misy tongony matetika maintsy lalotra indrindra tafo ary dia matetika sarotra ny hametraka-on ary miasa noho ny rindrina. Fa fohy ihany koa ny tafo misy afaka miasa amin'ny ronono kesika. Ny sarotra ny miasa ambony ambany matetika miteraka lalotra baomba splattering teo amin'ny gorodona, rindrina sy ny olona ambany.
Izany no antony malama tafo, izay tsy mampiasa retardant ary indraindray aza accelerant, dia nataony teo aloha ny rindrina. Nilaozan'ny toetr'andro sokay mora ary norakofako avy eny ambony malamalama sokay rindrina rehefa lena. Ny splatters avy amin'ny valin-drihana malamalama mora ary norakofako eny niteraka blueboard fa tsy avy amin'ny efa voalalotra manda. Care dia tsy maintsy ho raisina, rehefa mijoro eo ambanin'ny trowel na plasterer hafa.
Ny ankapobeny sarotra ny miasa ny valin-drihana mandrobo mitsoaka ny vidiny ambony kokoa. Ny teknika dia tsy miova ho toy ny malamalama rindrina fa zoro Tamin'ny taona hafahafa ho an'ny plasterer.
Address: No. 17, Fengyang Street, High-Tech Development Zone, Zhengzhou, Henan, Sina (Tanibe).